aunghtetkyaw43 in introducingyourself
Mingalarpar(hello) how are you all?
My name is Aung Htet Kyaw as @aunghtetkyaw
I just join steemit about three days ago. And i would like to introduce myself.
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ အောင်ထက်ကျော် @aunghtetkyaw ပါခင်ဗျား ....ကျွန်တော် steemit ကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးရက်လောက်ကမှ
Join ထားတာပါ ခင်ဗျား....ဒါကြောင့် အခုကျွန်တော် steemit user အားလုံးနဲ့ မိတ်ဆက်ချင်လို့ပါ ခင်ဗျား....
Who i am?(as the styles of hackers)😜😜😜
ကျနော်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? ကျွန်တော့ အကြောင်းလေးကို မိတ်ဆက်ပါ့မယ် ခင်ဗျား
I am 20 years old.I live in Dawei Thanintharyi Region Myanmar. It is justasmall city but one of the most beautiful and kindness places in Myanmar.I live with my parents .There are three peoples in my family. My father ,my mother and i. I amacomputer university(fourth years )student and want to beaperfect programmer. So i use most of my spears time learning about programming languages.(as java,c#,c++,prolog,8085,audino,android,.....etc)
ကျွန်တော် အခုလက်ရှိအသက် ၂၀ ရှိပါပီ ခင်ဗျား ကျွန်တော်နေတာက တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့မှာပါ ခင်ဗျား....
ထားဝယ်ဆိုတာကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်း မြို့ငယ်လေး တစ်မြို့ဖြစ်ပေမဲ့
သာယာလှပပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ မြို့သူမြို့သားတွေနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မြို့လေးပါဗျ
ကျွန်တော်က အခု ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)မှာ စတုတ္ထနှစ် တက်ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ.....programmer ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်လို့ပါ ခင်ဗျား....
ဒါကြောင့် အားလပ်ချိန်တွေမှာ programming ကိုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား
After, i have special hobby in football playing. It is my favourate sports. So ,i play football every evening with my friends.My favourate football club is Real Madrid FC.(Cristiano Ronaldo7is my favourate football player)
အားကစားကတော့ ဘောလုံးကန်ရတာကို ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား.....
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညနေတိုင်း ဘောလုံးကန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ.....
ဘောလုံးပွဲတော့ မလောင်းတတ်ဘူးခင်ဗျား😜😜😜 လောင်းကစား ၀ါသနာမပါလို့. ....
ကျွန်တော့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး ဘောလုံး ကလပ်အသင်းကတော့ real madrid fc ပါဗျ .....စီရိုနဒိုက ကျနော့်ရဲ့ အားအကျရဆုံး ကစားသမားလေ...😍😍😍
And here is my facebook acount lino. You can add me we can be friend. https://www.facebook.com/profile.php?id=100005583675039
ဒါကတော့ ကျနော့်ရဲ့ ဖေ့စဘုတ်ခ် အကောင့်လင့်ပါဗျ .add ပေးကြပါဦး သူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်လို့ပါ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005583675039
And thank you so much . This is my first post and i will write the beautiful of Thanintharyi and about Dawei city. So, i will have your support to continues.....
ဒါကတော့ကျနော့်ရဲ့ ပထမဆုံး introducing post လေးပါခင်ဗျား.....
နောက်ထပ်လဲ တနင်္သာရီတိုင်းရဲ့ အလှအပတွေနဲ့ ထားဝယ်မြို့အကြောင်းတွေကို ရေးတင်ဖို့ရှိတာမို့ လိုအပ်တာတွေကို လမ်းပြပေးရင်း အားပေးကြပါဦးလို့
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား......
Forever steemit lover
introducingyourself myanmar new life steemit
မိတ်ဆက်ပို့စ်ရေးထားတာပြည့်စုံ့လိုက်တာ ကိုယ်တွေတုန်းကအဲ့လိုရေးတတ်ဖူး။ introduceyoursèlf ဆိုပြီး ing ဖြုတ်လိုက်စေချင်ပါတယ် ။tranding မှာကမပါတော့ Steemit ရဲ့ intro အုပ်စုထဲပါမလာရင် introduce စောင့်ကြည့်ကူညီ vote ပေးနေသူတွေမတွေ့ရတော့ဘူး၊ပြီးတော့ အကြံတစ်ခုပေးချင်တယ် ။Steemit မှာ စိတ်ရှည်ပါ၊သည်းခံပါ၊ ဇွဲရှိပါ၊အကျိုးများပါလိမ့်မယ်လို့
Thank you sir. ဒါမဲ့ edit ကနေ ၀င်ပြင်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ
နောက်က tag မှာ ထပ်ထည့်ပါ ရှေ့ဆုံးက tag ကပြင်မရပါ အဲဒါကြောင့် myanmar ကိုရှေ့ဆုံးမှာ ထည့်ခိုင်းရခြင်းပါ
ဆရာကို CB မှာတက်သွယ်ပါ အောင်ထက်ကျော်။
welcome ပါ ဗျာ ဆက်လျက်အားပေးနေပါမယ် နောက်ထက် post လေးတွေ ဆက်တင်ပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ တနသာင်္ရီ တိုင်း အလှအပ တွေကို စာလေးနဲ့ ခံစားချင် ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဗျား အခုလိုနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုလို့ ပိုပီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား
ok welcome bro
Thank you so much dear for your warmly
Fresher welcome လားဗျ😂😂
Thank for your warmly😍
kokonaing46 · 4년 전
ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြီး အခုလိုကြိုဆိုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဗျ
Thank you so big brother
shoonlay41 · 4년 전
Wellcome my fri
Thank for your warmly ..
Thank you zo much dear
myintaungnaing34 · 4년 전
Ok bro ကျေးဇူဗျ
Thank for your warmly
htetwaihin53 · 4년 전
Warmly Welcome to Steemit..see you around..
pixeljar25 · 4년 전
Welcome to steemit! Thanks for writing in English so I can understand it as well :)
I am very interested in visiting Myanmar sometime. It looks so beautiful! Good luck with your programming :)
Thank . Where you from my fri?
nainglinn46 · 4년 전
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ bro လိုအပ်တာရှိရင်လဲပြောပြပေးပါဗျ